Ukuqwalaselwa kuMsila omde kunye neShishini loMculo | Martech Zone
Ukuqwalaselwa kuMsila omde kunye neShishini loMculo
NgoLwesithathu, Septemba 27, 2006 NgoLwesithathu, Julayi 9, 2014 Douglas Karr
Ndadibana nezinye iiNtloko zaseNtengiso zase-Indianapolis kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuxoxa Umsila omde. Incwadi enkulu kwaye uChris Anderson ngumbhali omnandi.
Ukusukela ukuba incwadi ihanjisiwe, abanye abantu bathathe u-Chris kunye nengcinga yokuba ngandlela thile 'wayila' Umsila omde. Andiqondi ukuba uChris wayila ithiyori ye- Umsila omde, kodwa wayizekelisa kakuhle.
Kwisidlo sasemini, njengoko abantu bexoxa ngale ncwadi, ndicinga ukuba uninzi lwethu luye lwaqonda ukuba Umsila omde yinkqubo engenakuphepheka njengalo naliphi na elinye ishishini. Kwakukho kuphela abavelisi beemoto, iqaqobana lotywala, abenzi abambalwa bezinto zombane… kodwa ixesha elongezelelekileyo njengoko ubuchwephesha bokusasaza kunye nokwenza imveliso kuguqukile, ubuchule buqhubekile nokukhula. Umsila omde uphantse wafana UMthetho kaMorey zokwenza nokuhambisa.
Ndicinga ukuba imboni ecacileyo yile mveliso yomculo. Kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo, zazimbalwa ii-studio kunye neelebheli ezimbalwa ezazisetyenziselwa ukuthatha isigqibo sokuba zenziwe ngubani kwaye ngubani ongazenziyo. Emva koko, izikhululo zikanomathotholo zigqibe ngento edlalwayo nengadlaliyo. Nokuba kukhethwa kubathengi ntoni, ukwenziwa kunye nokusasazwa komculo bekuncinci kakhulu.
Ngoku, ilula. Okwam unyana ubhala, abhale, adlale, arekhode, axube, kwaye ahambise umculo ngexabiso elincinci kwiwebhusayithi yakhe. Akukho mntu phakathi kwakhe nomthengi… akukho namnye. Akukho mntu unokumxelela ukuba akanakufumana irekhodi, akukho mntu uza kumhlawulisa ngokurekhoda iCD, akukho namnye oza kumxelela ukuba abazukudlala umculo wakhe. Indoda ephakathi isikwe isisombululo!
Kuyothusa loo mntu uphakathi, kodwa kukho umgca ongapheliyo wabantu 'abasikiweyo' kunikezelo nakwimveliso njengoko iindlela ziye zabiza kakhulu kwaye zasebenza ngakumbi. Yindalo yendalo. Ingxaki kumzi mveliso womculo kukuba bekukho so imali eninzi phakathi komthengi kunye nemvumi. Baninzi oosozigidi kolu shishino apho mna nawe singazange seva.
Ke… kuthekani ukuba imvumi enkulu yenze $ 75ka ngonyaka? Ungathini xa benama-401k, bekufuneka basebenze veki nganye ukuzisa ibhekoni ekhaya, bekufuneka bafune umsebenzi apha naphaya… ingaba imbi loo nto? Andicingi njalo. Ndiyabazi oomatshini ababengabaculi abanelothe - umsebenzi wabo wawusoloko ugqibelele… kwaye zange benze ngaphezulu kwama- $ 60ka ngonyaka. Kutheni le nto le mvumi ixabiseke ngakumbi kunomchweli? Bobabini basebenze ubomi babo bonke uhlobo. Bobabini baphakama ukuya kwinqanaba lokugqibelela elathi lafumana ingqalelo kunye nembeko yabo babangqongileyo. Kutheni le nto omnye efumana izigidi kanti omnye engenamali?
Le yimibuzo efuna ukuba icandelo lezomculo lifikelele kuyo. Isakhono sokwabelana ngomculo ngetekhnoloji siya kuhlala sikhokelela kulawulo lwamalungelo edijithali kunye netekhnoloji. Isizukulwana esilandelayo seNkqubo yokuSebenza, abaThunywa abaKhawulezileyo, njl.njl. Ndizakucula uJoe noJoe bazokwabelana nam ngengoma- ngaphandle kwenkonzo phakathi.
Umzi mveliso weRIAA kunye noMculo ulwa ngokulula nokuvela kweshishini. Bangazama ukuyandisa, kodwa akunamsebenzi.
Sep 29, 2006 kwi-7: 58 AM
"Kutheni le nto omnye efumana izigidi kanti omnye engenamali?"
Kuba nangona bendingazukuhlawula imali elungileyo ukuhlala ndibukele umatshini emsebenzini, ndingathengisa umphefumlo wam ngetikiti leRolling Stones.
Yiyo loo nto bahlukile. Mna, mthengi, ndibaxabisa ngokwahlukileyo.